Blockchain သတင်းများ 8 ဇန္နဝါရီလ 2018 - Blockchain သတင်းများ
ဇန္နဝါရီလ 8, 2018 admin
Blockchain သတင်းများ 8 ဇန္နဝါရီလ 2018
Ron Paul Legal Bitcoin
ဟောင်းများရီပတ်ဘလီကန်အောက်လွှတ်တော်အမတ် Ron Paul သူအားလုံးအနေနဲ့အခြားရွေးချယ်စရာငွေကြေးအဖြစ် Bitcoin အဘို့ဖြစ်၏ပြောပါတယ်, အငြင်းပွားဖွယ်အကြောင်းကိုအရာအားလုံးသကဲ့သို့ရှည်လျား, ကို virtual ပိုင်ဆိုင်မှုဥပဒေရေးရာဖြစ်ပါသည်.
တက္ကဆက်ပြည်နယ်ကနေယခင်ရီပတ်ဘလစ်ကန်အောက်လွှတ်တော်အမတ်မကြာသေးမီကသူကွန်ဂရက်၌ရှိ၏အခါက CNN သတိပေး, သူကလက်ရှိစနစ်ကမုန်းနေသောကြောင့်သူယှဉ်ပြိုင်ငွေကြေးခွင့်ပြုပါရန်ဥပဒေပြဌာန်းမိတ်ဆက်.
"ကျနော်တို့ရှိသည်သောစနစ်အားရွံရှာ. တရားဝင်အတုဗဟိုဘဏ်မှာ. ဒါကကြီးမားတဲ့ misstep နှင့်ကြီးမားသောပြဿနာဖြစ်ပါသည်. ဒါကြောင့်လူရွေးချယ်ဖို့ခွင့်ရှိသည်သငျ့သညျ,"ဟုအဆိုပါ Newsmax Insider ကပြောပါတယ်.
ပိုက်ဆံစတင်ခဲ့သည့်အခါ "သူတို့မူလကလုပ်ခဲ့တယ်. ထိုအခါသူတို့ကရွှေငွေကောက်ယူ. နှင့်အစိုးရကျော်သိမ်းယူနှင့်စံအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းနှင့်ကလက်ဝါးကြီးအုပ်ထားပြီး. နှင့်ဤနိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်ဖျက်ဆီးခံရ,"ပေါလုကပြောပါတယ်.
"ငါသည်သူတို့အရွေးချယ်မှုအားလုံးနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကလူကငွေအဖြစ်အသုံးပြုချင်တရားဝင်ချင်. သို့ရာတွင်အဘယ်သူမျှလိမ်လည်မှု. သငျသညျလိမ်လည်မှုကျူးလွန်မနိုင်,"ဟုအဆိုပါတက္ကဆက်လွတ်လပ်သည့်လစ်ဘရယ်ဝါဒက CNN ရဲ့မိုက်ကယ် Smerconish ပြောသည်.
Ron Paul ဆရာဝန်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်, စာရေးသူ, ဟောင်းရီပတ်ဘလီကန်အောက်လွှတ်တော်အမတ်. ရှင်ပေါလုသည်လည်းတစ်ဦးနှစ်ဦးအချိန်ရီပတ်ဘလီကန်သမ္မတလောင်းဖြစ်ပါတယ်, နှင့်အတွင်းလွတ်လပ်သည့်လစ်ဘရယ်ဝါဒပါတီ၏သမ္မတအဖြစ်လျာထားသော 1988 U.S. သမ္မတရွေးကောက်ပွဲ.
ViaBTC ကြောင့်ယခုအပတ်သတ္တုတူးဖော်ရေးကန်ထရိုက်၎င်း၏စျေးကွက်ပိတ်ဖို့လိမ့်မည်ဟုကြေညာလိုက်ပါတယ်တရုတ် Bitcoin သတ္တုတူးဖော်ရေးရေကူးကန်, တိုင်းပြည်အတွင်းအာဏာပိုင်များအားဖြင့်တစ်ဦးပိတ်ပင်မှုအသစ်များအစီရင်ခံစာများကြားတွင်လာမယ့်အပြောင်းအရွေ့.
တစ်ဦးဇန်နဝါရီလထဲမှာ. 8 ကြေညာချက်, ViaBTC ကစျေးကွက်ပိတ်သိမ်းမယ်လို့ဆိုပါတယ် - အသုံးပြုသူများသည်အာဏာကိုတားဆီးခြင်းတစ်အချို့ပမာဏကိုသူတို့ကို entitling စာချုပ်များကိုဝယ်ယူနိုင်သည့်မှတဆင့် (နှင့်ဆက်စပ် cryptocurrency ဆုကြေးငွေ) - ဇန်နဝါရီဖြစ်ပါသည်. 10. အကြောင်းပြချက်: ကုမ္ပဏီမှလိုလား “ထင်ကြေးထိန်းချုပ်ဖို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများများ၏အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ပေးသည်။”
“ASAP အားလုံးသင်၏မိုးတိမ်သတ္တုတူးဖော်ရေးစာချုပ်ကုန်သွယ်ပြီးအောင် ကျေးဇူးပြု.. သင့်ရဲ့ထောက်ခံမှုများအတွက်သင်တို့ရှိသမျှကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်,” ViaBTC ကဆက်ပြောသည်.
ViaBTC ပထမဦးဆုံးနိုဝင်ဘာလအတွင်းက၎င်း၏မိုဃ်းတိမ်ကိုသတ္တုတူးဖော်ရေးဝန်ဆောင်မှုစတင် 2016.
အဆိုပါပိတ်သိမ်း ViaBTC နိုင်ငံ၏လဲလှယ်ဂေဟစနစ်အပေါ်တရုတ်အာဏာပိုင်များကနှိမ်နင်းဖို့တုန့်ပြန်၎င်း၏ cryptocurrency လဲလှယ်ပိတ်ပစ်လအကြာလာ, ရုံ၏အစအပြီးစတင်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကို 2016. အရာရှိတွေကလည်းကနဦးအကြွေစေ့ဟာယယဇ်ပူဇော်၏အသုံးပြုမှုကိုတားမြစ်ဖို့သို့ပြောင်းရွှေ့ (ICOs) စက်တင်ဘာလထဲမှာ.
သို့သျောလညျးနှစ်ခုဖြစ်ရပ်များဆက်စပ်ဖြစ်ကြောင်းအဘယ်သူမျှမရှင်းလင်းသောအရိပ်အယောင်ရှိမယ့်အနေဖြင့်, နောက်ဆုံးပေါ်ကြေညာချက်တရုတ်အရာရှိများပြည်တွင်း Bitcoin သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများတစ်တဖြည်းဖြည်းပိတ်ရှာကြသည်အသစ်အစီရင်ခံစာများအောက်ပါအတိုင်း.
တနင်္ဂနွေကိုကျော်ဖြန့်ဝေစာရွက်စာတမ်းများအရနှင့်အင်တာနက်ဘဏ္ဍာရေး၏ဦးစီး Group မှမှစွပ်စွဲဆေးတစ်လက်အန္တရာယ်များ, တရုတ်ထိန်းညှိ, အရာရှိများကဒေသခံမိုင်းလုပ်သားများအတွက်ထောက်ခံမှုတားဆီးရန်ချင်, ပါဝါနှင့်မြေယာအသုံးပြုမှုကိုလှည့်ပတ်အစီအမံတောင်းဆို. စာရွက်စာတမ်းများတစ်ခုမှာအရာရှိများက 10th အားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်စဉ်ကိုများအတွက်အစီအစဉ်များကိုပွငျဆငျကြောင်းမေတ္တာရပ်ခံ.
အေဂျင်စီရဲ့ကျန်းရုံးကနေတစ်ဦးကကိုယ်စားလှယ် Quartz ဖို့စာရွက်စာတမ်းများရဲ့ veracity အတည်ပြုခဲ့သည်ပေမယ့်နောက်ထပ်မှတ်ချက်ပေးရန်ငြင်းဆိုခဲ့သည်.
အဖြစ်နောက်ထပ်ဘလွန်းဘာ့ဂ်တို့ကရုပ်ပြ, တရုတ်နိုင်ငံတွင်မိုင်းလုပ်သားကွာတိုင်းပြည်ကနေသူတို့ရဲ့ခြေရာကိုရွှေ့ပြောင်းနေကြပါတယ်, ဥရောပနှင့်မြောက်အမေရိကအသစ်တည်နေရာများကိုမျက်စိကျ. အဆိုပါသတင်းကိုဝန်ဆောင်မှုတရုတ်အရာရှိများအနေနဲ့ပြဋ္ဌာန်းချင်ကြောင်းအစီရင်ခံ “စနစ်တကျ” သတ္တုတွင်းဂေဟစနစ်၏ shutdown ချ.
အဆိုပါ launc ကြောင့် ...
Blockchain သတင်းများ 17 ဇန္နဝါရီလ 2018
Previous Post:ICO အကြောင်း: အဘယ်သူသည်လက္ခဏာသက်သေရောင်းအားစဉ်အတွင်းအများဆုံးရန်ပုံငွေများစုဆောင်း
Next Post:ကြေးနန်း ICO အစီအစဉ်များ